Xarumaha Wasaaradaha Dowlada Puntland Oo Korontada Laga Goostay. • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Xarumaha Wasaaradaha Dowlada Puntland Oo Korontada Laga Goostay.
Xarumaha Wasaaradaha Dowlada Puntland Oo Korontada Laga Goostay.
December 21, 2012 - By: Khalid Yusuf
Waxaa shalay iyo maanta korontadii laga goostay inta badan Wasaaradaha Dowlada Puntland ee caasimada Puntland ee Garowe.
Warkan ayaa soo baxay kadib markii la sheegay in horey digniino Wasaaradaha loo siiyey iney bixiyaan biilashii lagu lahaa 4tii bilood ee lasoo dhaafay.
Hay’ada Korontada ee Nugaal Electric Company ee NEC ayaa shalay gebi ahaan korontada ka jaratay xarunta Dalxiiska ee magaalada Garowe. Xaruntan ayey ku yaalaan inta badan Wasaaradaha dowlada Puntland.
Wasaaradaha korontada laga jartay ayaa waxaa kamid ah:
1- Wasaaradda Arrimaha Gudaha
2- Wasaarada Amniga
3- Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta
4- Wasaaradda Haweenka
5-Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalah & Sportiga
6- Wasaaradda Duurjoogta iyo Deegaanka
7- Xafiiska Hanti-dhawrka Guud ee Puntland
Dhamaan xarumahan ayaa shalay laga jartay Korontadii kadib markii ay bixin waayeen biilashii lagu lahaa, afartii bilood ee lasoo dhaafay halka qaar Wasaaradaha loo heysto muddo 5 bil ah in lacagta laga sugayey oo digniin loo dirayey.
Waxaa ayaduna maanta Korontadii laga goostay Wasaarada Duulista Hawada ee Puntland oo xarunteedu ku taal bartamaha magaalada Garowe. Waxaana ayadana la sheegay in aysan iska bixin korontadii 4tii billood ee lasoo dhaafay.
Horseed Media ayey u xaqiijiyeen dhamaan Shaqaalaha Wasaaradahaasi ka shaqeeya oo aan si gaar gaar ah ulla xariirnay, ayagoo xaqiijiyey in maalinimadii shalay aan wax hawl ah la qaban, maantana fasax lagu jiray, waxayna hawlwadeenada Horseed Media qaarkood la soo xiriiray ay sheegeen in hada la wado dadaal lagu sii deynayo korontada la jartay. Si ay hawshooda dib ugu noqdaan maalinimada beri ah (Sabti). Balse korontada ayaa hada ah mid weli maqan.
Qaar kamid ah Shaqaala Wasaaradda Warfaafinta ayaa sheegay in horey digniin loosoo gaarsiiyey dhamaan Wasaarada oo muddo 4 goor ah digniin uga timid shirkada NEC inay jaran doonto, balse aysan dhicin sida muuqata in la bixiyo lacagta korontada.
Mushahar la’aan Shaqaalaha
Waxay hawlwadeenadan noo xaqiijiyeen in sidoo kale lagu leeyahay Wasaaradaha biilasha Biyaha iyo lacago dhanka adeega Wasaarada ah, waxayna sheegeen hawlwadeenada Wasaaradaha inaysan ayagu laftooda aysan helin wax mushahar ah bilihii lasoo dhaafay, arrintan ayey ku micneeyeen in muddo 4 bilood laga joogo ay joogsadeen dakhligii loogu qoondeeyey miisaaniyad sanadeedka.
Mushahar la’aan Ciidamada
Horaantii todobaadkan ayey sidoo kale Ciidamada Puntland codsadeen in lacagtooda lasiiyo ayadoo ciidamada Booliiska iyo Darawiishta aysan wax mushahar ah qaadan in ka badan 3 bilood.
Qodobkan ayaa sidoo kale looga hadlay kulan ka dhacay Madaxtooyada Bosaaso horaantii todobaadkan, balse weli lama siin wax mushahar ah ciidamada walow Madaxtooyada Bosaaso xaflad loogu qabtay ciidamada lagu dhiiri gelinayey , xafladaasi oo ay ka qeyb galeen inta badan ciidamada Madaxtooyada.
Codsi Ganasatada loo jeediyey
Warar hoose oo ay Horseed Media ka helayso xarunta Madaxtooyada ayaa sheegaya in Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole uu dhawaan kulan xasaasi ah la yeeshay qaar kamid ah Shirkadaha waaweyn ee Puntland, kuwaasi oo uu kula kulmay magaalada Bosaaso.
Kulankaasi ayaa lagu sheegay in looga hadlay in Ganacsatada shirkadaha waaweyn ay qaarkood deymo siiyaan dowlada ay isaga bixiso kharashaadka daruuriga ah, arrintan oo la sheegay inay isku af fahmi waayeen ganacsatada iyo Madaxweynaha. Warkan oo aanu wax ka weydiinay xafiiska Madaxweynaha ayaa illaa iyo hada wax jawaab ah ka bixin.
In kastoo xiligan uu furan yahay Xafiiska Hanti Dhawrka Guud ee Puntland, oo la sheegay in shalay korontada laga goostay, ayaa hadana xafiiska hawshiisa si haboon u qabsan, mana jirto illaa iyo hada wax warbixin ah oo uu kasoo saaray dakhliga khasnada Dowlada iyo sidii loo maareeyey.
Xili wakhti kooban uu ka haray xiligii dowlada xafiiska loo doortay, ayaa hadana waxaan cadeyn sidii loo maareeyey dakhligada dowlada oo sanadihii lasoo dhaafay marayey heerkii ugu sareeyey ama Miisaaniyadii ugu badneyd Puntland ebid loo dejiyo. Waxaana sare loo qaaday Canshuurto 40%, xili uu hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha iyo ganacsiga Puntland.
Dhanka kale waxaa hada bilowday in shirkadaha Deyn-maha ku leh dowlada ay joojiyaan wixii ay bixin jireen, ayagoo hada usoo jeestay inay codsadaan in lasiiyo lacagtooda. Mana aha midan tii ugu horeysay.
Waxaa jiray Shirkado iyo Ganacsato badan oo sidan oo kale lacagtooda ku waayey kadib markii xukuumadii hore ee Cadde Musse xilka wareejinaysay dayman badan laga qaatay, lacagtaasi oo ay diiday inay bixiso dowladii xilka la wareegtay ee Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Cabsida ganacsatada horey daynmaha u siiyey dowlada ay qabaan ayaa ah iyadoo xiligan lacago badan oo dhanka dowlada uga maqanyihiin iyo inaysan weli heysan damiin ah adag oo ah in lacagtooda lasiinayo, waa hadii aysan hada u istaagin codsiga lacagaha ka maqan, sida uu Horseed Media u sheegay hawlwadeen ka tirsan shirkada NEC oo ayadu hada korontadii ka jaratay xarumaha Wasaaraddaha.
Canshuuro dheeraad ah
Bishii Oktoober ayuu Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole isugu yeeray dhamaan Wasaaradaha iyo Agaasimayaasha Puntland, Kulankaas waxaa looga hadlay in la dar dar geliyo qaadista canshuuraha baaqday iyo sidii looga daba tegi lahaa canshuurihii kusoo xaroon waayey khasnada dowlada.
Musuq Maasuqa iyo Khasnada Dowlada
Mid kamid ah macalimiinta wax ka dhiga Cilmiga Dhaqaalaha mid kamid ah Jaamacadaha ku yaal Puntland, oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo, ayaa Horseed Media uga waramay dhibaatada ugu weyn ee hada heysata dowlada Puntland.
“…Dhibka heysta dowlada maaha Canshuuro yaraan ama dakhli yaraan, ee dhibka ugu weyn waxa weeye lacagta baxda oo ah mid aan qeyb ka ahayn Miisaaniyadii horey dowlada u dajisatay, waxaana sidoo kale jirin hanti dhawr guud oo isha ku haya sida wax u baxaan iyo waxa dowlada soo gala….” ayuu yiri macalinka Jaamacada wax ka dhiga oo anaga codsaday inaan magaciisa la shaacin arrimo la xariira amnigiisa awgood.
Macalinkan ayaa intaasi ku daray “…,Tusaale waxaan kuu siinayaa Miisaaniyada loo Jaan-gooyey Madaxtooyada maaha mid qoran oo meel ku cad, Madaxtooyada kaliya ayaa ka kharash badan ayadoo la isu geeyey dhamaan Wasaaradaha iyo mushaharaadka ciidamada, markala laga reebo lacagta hay’adahaasi ka helaan deeqaha caalamka, balse culeyska kharashaadkan badan maaha mid ay kabi karto canshuurta dadka laga qaado….”
Wuxuu intaasi ku daray macalinka “….Tusaale kale waxaa ah kharashkan faraha badan oo ay madaxda sar sare ee dowlada bixinayaan oo sida shaqsiga ah u isticmaalayaan, arrintan waa mid looga fadhiyo Saxaafada inay baarto, Tusaale Guryaha Faraha badan oo hada dhismahooda ka socdo magaalooyinka caasimada oo ah guryo si gaar ah loo leeyahay, waxaana ummada oo dhan ogtahay guryaha ay mas’uuliyiinta dhisanayaan oo kan ugu yar lagu qiimeenayo boqolaal kun oo dollar, dhamaan dhismaha gaarka loo leeyahay ee guryaha mas’uuliyiinta dowlada kuma jiraan Miisaaniyada dowlada, meesha laga bixiyona dee dabcan waa loo jeedaa waa kharashaadkii laga saaray khasnada oo cid baarata aysan jirin…Waa marka khasab in meelihii lacagtaasi loogu talo galay aysan heli wixii xaqa u lahaayeen sida mushaharaadka shaqaalaha iyo ciidamada….”
Dhanka kale meesha ay sarta ka qurunsan tahay Waa Madaxtooyada iyo Wasaaradda Maaliyada oo ah labada hay’adooda ee dhakhliga Puntland maamula, labadaas hay’adoodna cid la xisaabtami karta ma jirto.
“…Baarlamaankii la rabay inuu la xisaabtamo lama xisaabtami karo oo horta aqoonteedii inuu leeyahay waaba mid aan la hubin, middeeda kale Xildhibaanadu waxay mushaharka ka sugaan Wasiirka Maaliyada, marka nin ay mushahar ka qaataan wax inay weydiiyaan mindha way ka xishoodeen,…balse xaalada hada weyba is bedashay oo dhamaan Xildhibaanada sharciyan Wakhtigii lo dhaariyey waa dhamaaday, waxaa taas usii dheer waxayba noqdeen xubno kamid ah Xisbiga Madaxweynaha Guddoomiyaha ka yahay, cid cid la xisaabtami karta ma jirto…Wasiirka Maaliyadana wuxuu kaliya kharashkan kala xisaabtamaa Madaxtooyada iyo Madaxweynaha oo kaliya…marka hadii sidaa ay tahay hab shaqeynta dowlada dabcan ceebo badan waa iska soo bax baxayaan….” ayuu yiri Macalimkan cilmiga Dhaqaalaha ka dhiga mid kamid ah Jaamacadaha Puntland oo Horseed Media maanta u waramayey.